राजपा एकीकरणप्रति झा र यादव असन्तुष्ट : RajdhaniDaily.com -
Home भर्खरै राजपा एकीकरणप्रति झा र यादव असन्तुष्ट
जनकपुरधाम । बुधबार अबेर राति समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालबीच भएको एकीकरणलाई लिएर राजपामा असन्तुष्टि देखिएको छ । एकीकरणका लागि छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा राजपा नेपाल अध्यक्षमण्डलका सदस्य अनिलकुमार झा र राजकिशोर यादव अनुपस्थित भएसँगै असन्तुष्टि बाहिरिएको हो ।
दुवैजना एकताको पहिलादेखि नै विरोधी रहदै आएका थिए । उनीहरुले पहिला राजपा नेपालको अधिवेशन हुनुपर्ने अनि मात्र समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण हुुनुपर्ने अडान लिँदै आएका थिए । उनीहरुलाई बैठकमा आउनका लागि पटक पटक आग्रह गरिएको थियो । उनीहरु आजको बैठकमा अनुपस्थित भएको एक नेताले बताए । एकीकरणका लागि भएको छलफलमा राजपा नेपालको तर्फबाट महन्थ ठाकुर, महेन्द्र राय यादव, राजेन्द्र महतो र शरतसिंह भण्डारी मात्र उपस्थित भए ।
अध्यक्षमण्डलका सदस्यद्वयको भूमिका के हुने सम्बन्धमा कसैले केही बताइरहेको छैन । उहाँ दूबैजना मोबाइल पनि उठाइरहनु भएको छैन । राजनीतिक विशलेषक डा. सुरेन्द्र लाभले भने, उहाँ दूबैजनाको मौनताले कुनै भूमिका खोली रहेको जस्तो लागि रहेको छ । यदि होइन भने अर्को विषमयकारी समाचार नआउन सक्छ भन्न सकिन्न । जो व्यक्ति राजपामा निर्णायक तहमा थिए अब त्यस्तो अवस्था रहँदैन उनको कथन थियो ।
उपेन्द्र यादव, अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी सहित राजपाका अध्यक्ष मण्डलका अन्य सदस्यहरुको पनि टुंग्याउन बाँकी नै रहेको ती नेताले बताए । यसअघिको बैठकमा राजेन्द्र महतोले तेस्रो बरियतामा अशोक राईलाई राख्न प्रस्ताब दिएका थिए । तर उपेन्द्र यादव तेस्रो वरियतामा आफू रहन चाहन्छन स्रोतले जनाएको छ ।
काठमाडौं । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण थप एक जनामा देखिएको छ । विराटनगरको कोशी अस्पतालमा परीक्षणका क्रममा झापाका ५० वर्षीय पुरुषमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण देखिएको...
सुत्केरी श्रीमतीलाई अलपात्र पारेर श्रीमान प्रेमिकासंग भागेपछि…
Editor-Picks नारायण ढुङ्गाना - March 19, 2021 0
काठमाडाैं । चौध वर्ष अघि देवकुमार (दिपेश) भुजेल र विनिता राउतको पिरती बस्दा छुट्नुपर्ने कल्पना कहिल्यै गरेनन् । ओखलढुङ्गाको रावादोलु गाउँको वनपाखामा लुकीछिपी लगाएको...
नयाँदिल्ली । महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेहरुको संख्या भारतमा छ लाख पुग्न लागेको छ । सरकारी अधिकारीहरुले बुधबार दिएको जानकारी अनुसार भारतमा हालसम्म कोरोनाभाइरसबाट...
रोनाल्डो चम्किदा युभेन्ट्स विजयी
Not-to-be-missed Kumar Raut - June 28, 2020 0
रोम । कोरोना भाइरसको महामारीकाबीच इटालीमा जारी रहेको फुटबल लिग सिरी एमा युभेन्टेसले लिसलाई शुक्रबार राति ४–० ले पराजित गरेको छ । यो खेलमा...
ड्राइभर ढोकाबाट खस्दा पल्टियो बस
धनकुटा । धनकुटाको नुनथलास्थित कोशी राजमार्गमा हिजो मंगलबार दिउँसो यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा चालकसहित तीन जना घाइते भए । तेह्रथुमबाट २५ जना यात्रु बोकेर...
प्रदेश २ Kumar Raut - November 18, 2020 0
कोरोना भाइरस संक्रमण संकटको सामना गरिरहेको बेला नेपाली महिलाको महान् चाड तीज आएको छ । यो बेलामा हामीले अत्यन्तै सतर्कतापूर्वक चाडपर्व, संस्कार, संस्कृति मनाउनुपर्ने...
Breaking News Roshan Shrestha - February 17, 2021 0
पाँचथर । भारतको सिक्किम राज्य सडक मार्गबाट नेपालसँग जोडिएको छ । पाँचथरको याङवरक गाउँपालिका–२ चिवाभञ्ज्याङस्थित नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रसम्म सिक्किम राज्य सरकारले सडक विस्तार गरेको...